रोईरहेको पलमायरा, यहाँका जनता माटो खाएर बाँचिरहेका छन् — News of The World
रोईरहेको पलमायरा, यहाँका जनता माटो खाएर बाँचिरहेका छन्
शिरीष जोशी कार्तिक २६, २०७४
मध्य एशियाली देश कुनै दिनको अति सुन्दर मुलुक पूर्बमा इराक, पश्चिममा लेबनान, उत्तरमा टर्की र दक्षीणमा जोर्डनले घेरिएको सीरिया जसको राजधानीको नाम हो दमास्कस । र राष्ट्रपती हुन् बसर अलअशद जसले पछिल्लो आठ वर्षदेखी शासन गरी राखेका छन् ।
जानकारहरुका अनुसार दमास्कसबाट १६५ किलोमीटरको दूरी पार गरेर सीरियाको होम्स शहर आउछ । होम्स शहरबाट १५० किलोमीटरको दूरी पार गरेपछि अलेप्पो, शहर र होम्स शहरबाट १६० किलोमिटरको दूरी पार गरेर पलमायरा आउछ । यो देशका नामी शहर होम्स, अलेप्पो, पलमायरा, र रक्का, हुन् । यीनै शहर मध्याको एक शहर हो पलमायरा कुनै समय बिस्वभरिका मानिसहरुले यो शहरलाई स्वर्गको चोक हैवन स्क्वायर (Heaven Square) भनेर चीन्दथे । तर, आतंकबादका कारण यी चार वटै शहर होम्स, अलेप्पो, पलमायरा, र रक्का, नर्क लोक बनेका छन् । पुराना पुराना पुरातात्विक सम्पत्तिको रुपमा चिनिने शहरका भौतिक महलहरु बम, र बारूदले, पा्रयः ध्वस्त छन् । यहाँका बिश्वबिद्यालय, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, थियटर, होटेल, सडक, सबै सखाप परिएका छन् । यि शहरहरु बिलापमा बाँचिरहेका छन् यतिबेला ।
भग्नावेश हुनुभन्दा पहिलेको पलमायरा
भग्नावेशपछिको भग्नावेशपछिको पलमायरा
यी शहरका ध्वस्त भएका भग्नावेशहरु हेर्दा आजभोली यो शहर मसानघाट जस्तै बनेकोले जो सुकैको पनि शरीर थर–थर काप्छ रे । आखिर के कारणले ध्वस्त भए त स्वर्गका चोक मानिएका शहर ? कसरी चलाईयो यस्तो प्रचीनतम शहरका इमारतहरु खरानी पार्न ? हथियार, हतौडा, सब्बल, र घन, भनिन्छ । कुनै जमानामा दुनियाको लागि सपनाका शहर थिए होम्स, अलेप्पो, पलमायरा, र रक्का । दुनियाको नजरमा आज सिरिया मा वार (war) चलेको जस्तो लाग्छ । तर अन्तरकथा र रहस्य बुझे पछि बिस्वकै सुपर पावर (power) भनेर चिनीने अमेरिका र रुसको योजनामा भएको यो युद्ध नभएर कारोबार हो भनिन्छ ।
अमेरिका सीरिया सरकारको बिरोधि हो भने रूस सिरिया सरकारको समर्थक हो । अमेरिका सिरियाका राष्ट्रपति बसर अल असदको सरकार ढलाउन चाहन्छ भने, रूस अशदको सत्ता टीकाउन चाहान्छ । यी दुइटै महासक्तिका कारण आज सिरिया खेल मैदान, रण भूमि, र सिरियाका नामी शहर श्मशान घाट जस्तै बनेका छन् ।
कुनै जमानामा सिरियाका शहररुको बारेमा लेख्दा कलम पनि डगमगाउथ्यो रे । आज यो देशका शहरहरु खण्डहरमा परिणत भएका छन् । सिरियाका सहरबासीहरु आफैले पालेका कुकुर, बिराला, र जन्मभूमिको माटो खाएर अन्तिम सास लिई रहेका छन् । आज पलमयरा, जाने साधारण मानिसलाई त। साक्षात यमराजको दर्शन गर्न गए सरह मानिन्छ रे । कुनै दिन यो शहर अल्कापुरी थियो रे । तर, आज आतंकबादका कारण बर्बादको मन्जर खेपी रहेछ पलमायरा । आज यो शहरको अतितको विराशत र बैभवता चकनाचूर भएको छ ।
एक समयमा पलमायराका प्राचीनतम कलात्मक ढङ्गले बनेका इमारत हरु हेर्न लाखौ पर्यटकहरूको लस्कर सिरिया पुग्दथ्यो । तर, आज पूरै शहर आतंकले खरानी बनेको छ । अन्तराष्ट्रिय समाचार, बिभिन्न पत्र पत्रिका मेग्जिन, टीवी, रिपोर्टका अनुसार अहिले सिरियका होम्स, अलेप्पो , पलमायरा, र रक्का, शहरमा साँस फेर्दा पनी ध्वनि जुञ्जायमान हुन्छ ।
कुनै जमानाको स्वर्गको चोक आज लासै लासको शहर बनेको छ । पुराना घरका भग्नावेशहरु गोली नै गोलीले प्वाँलै प्वाँल परेका छन् । अमेरिका र रुसका फाईटर बिमानहरु आकाशबाट बम, र गोलाहरु दागी राखेका छन् भने जमीनबाट एन्टी–टैंक मिसाइल, ए के ४७, रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन, बाट गोलिका बर्षा भइराख्छन् ।
सिरीयाको धर्ति यी दुईवटै महाशक्तिहरूको कारण मरुभूमि जस्तै बनेको छ । यी चारवटै शहर होम्स, अलेप्पो, पलमायरा र रक्का शहरका हरेक घरका भित्ताहरुमा मस्जिदमा, इमारतहरुमा, सहरका गल्ली–गल्लीमा आईएसआईएस ले अरबी भाषामा मानविय बिनास लीला लेखको पाइन्छ । आज, होम्स, अलेप्पो, रक्का, र पलमायराको दुर्दशालाई देख्दा अल्लाह, पैगम्बर मोहमद, हजरत मुसा, मुल्ला अमर, ईश्वर, यसु, र भगवान पनि रोएको भान हुन्छ त्यहाँका जनतालाई ।
सीरियामा युद्ध भड्काएर अमेरिका र रूस आफ्नो कारोबार चलाई राखेका छन् । जानकारहरुका अनुसार अमेरिका साना देशहरुमा पहिला आतंक फैलाउने र पछि आफ्नो (नेटो) सेना पठाएर देश नै खरानी पार्ने बाटोमा लागेको छ भने रूस आफुले निर्माण गरेका आधुनिक हतियारहरु बिक्री गर्न आतंकबादलाई पालेर पठाउने र शान्तिका नाममा आफ्नो देशका सेना पठायर हतियरको कारोबार गरि राखेको कुरा दुनिया द्धन्द्ध विश्लेषकहरुको भन्छन् ।
अचम्मत के भने नी अमेरिका लगायत अन्य पश्चिमा देशहरु छोटा, मोटा, र साना देशहरुमा पहिला आतंकबादलाई मलजल गर्ने र देशमा गृहयुद्ध मचाउने अनि ती देशलाई तहस–नहस पार्ने तथा मानबअधिकार, महिला अधिकार, बाल अधिकार, आदिका नाममा देशभित्र प्रबेश गरी त्यस देशको सभ्यता नै नष्ट गर्ने र देश आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्ने र दास बनाई राख्ने मनस्थिति पश्मिमाहरूको पुरानै नीति हो ।
सन् २०११ भन्दा पहिले ईराकमा अलकाइदा ईराक नामक एक आतंकबादि संगठन थियो । जसका कमाण्डर थिए सद्दाम हुसैन । उनले इराकलाई आतंकले तहस–नहस पारेका थिए । ती आतंकीलाई सफाई गर्न अमेरिकी सेनाले इरकमा लामो अप्रेसन चलाएको थियो । २०११ मा लामो लडाईपछि अमेरिकाले इराकलाई सद्दाम हुसैनको चँगुलबाट मुक्त गराएको थियो । सद्दाम हुसैनको चँगुलबाट मुक्त गरेको समयमा इराक पुर्णरुपमा बर्बाद भई सकेको थियो । उहि बर्बाद इराकलाई छोडी अमेरिकाले सन् २०११ मा आफ्ना सबै सेना फिर्ता बोलाएको थियो । अमेरिकी सेनाले इराक छोडेकै समयमा इराकमा सानो तिनो आतंकबादी संगठनहरु सकृय भई एकाआपसमा लड्न सुरु गरेका थिए । तिनै गुटका एक कमाण्डर थिए ‘अबु बकर अल बगदादी’ अलकायदाका चिफ थिए उनी । उनले सन् २००६ देखी नै इराकमा आतंकबाद को जमीन तयार गरेको बताइन्छ ।
त्यस समय बगदादीको साथमा न, पैसा थियो न, लडाकु नै थिए । नत कसैको सहयोग थियो । ति बगदादी इराककै स्थानीय बासिन्दा थिए । बिदेशी सेनाले ईराक छोडेको समयमा नै बगदादीले ईराकमा नँया साम्राज्य चलाउने योजना बनाएका थिए । जब अमेरिकी सेना ईराक छोडी सकेको थियो त्यसबेला इराक पूरै बर्बाद भइसकेको थियो । इराकको इंफ्रास्ट्रक्चर ९ष्लाचबकतचगअतगचभ० पूरै तहस नहस भइसकेको थियो । इराकका सात खाली सत्ता मात्रै थियो । त्यतिबेला बगदादीले खासै उपलब्धि गर्न सकेका थिएनन् । सोही समयमा बगदादीले संगठनको नाम बदलेर इस्लामिक स्टेट अफ इराक आईएसआई राखेको थिए । बगदादीले सद्दाम हुसैनका सिपाही र कमाण्डरहरूलाई आईएसआईमा सामिल गराएका थिए । शुरुआती समयमा बगदादीले निसानामा पुलिसका चौकी, आर्मी ब्यारेक, स्टेशन बनाएको थियो । त्यतिबेलासम्म आईएसआईले हजारौ मानिसलाई आईएसआईमा सामिल गराई सकेको थियो तर सफलता भने मिलेको थिएन ।
सन् २००९ मा बगदादीले सिरियामा पनि आँखा लगाएको थियो र त्यस समय सीरिया गृहयुद्धको चपेटामा थियो । फ्री सीरियन आर्मी (Free Syrian Army) र अकायदा त्यहाँ दुइटा गुट थिए । फ्री सीरियन आर्मीको (Free Syrian Army) कमान राष्ट्रपतिले समालेका थिए । चार बर्ष सम्म इस्लामिक स्टेट अफ इराक (आईएसआई) लाई कुनै सफलता मिलेको थिएन । त्यहि समयमा बगदादीले संगठनको नाम बदलेर इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एण्ड इराक (आईएसआईएस) बनाएको थियो ।
सन् २०१३ जूनमा फ्री सीरियन आर्मीका जर्नलले दुनियासँग एक यस्तो अपील गरेका थिए, यदि आफ्ना सेनालाई हथियार मिलेन भने एक महीनामै आतंकीका सामु युद्ध हार्ने कुरा बताएका थिए । ति जर्नलले अपील गरेको हप्तादिन नबीप्दै अमेरिका, इजरायल, जोर्डन, टर्की, साऊदि अरब तथा कतारले आर्मिका हथियार, गोला, बारूद, पैसा, र ट्रेनिंग दिन सुरु गरेका थिए । सारा आधुनिक हथियार एन्टी–टैंक मिसाईल, गोला, बारूद, सीरिया पु¥याई दिएका थिए । फ्री सीरियन आर्मीले आईएसआईका लडाकु हरुलाई गोलिले भुट्न सुरु गरेका थिए । तर, जुन हथियार सिरियन आर्मीका हातमा थिए । एकवर्ष नहुदै तिनै हतियार आईएसआईएस कहा पनि पुगेका थिए । सोही समयमा सिरियामा ‘फ्रीडम फाइटर’ नामको नकाब लगाएर Freedom Fighter) एक नया संगठन खुलेको थियो । जुन संगठनलाई अमेरिकी आर्मीले जाने र वा अंजानमा ट्रेनिंग दिएको थियो भन्छन् जानकरहरु । पछि त्यो संगठन आईएसआईएसमा सहभागी भएको थियो । बगदादीको साथमा त्यतिबेला आधुनिक हतियार १५ हजार जति सेना थिए । उस्को संगठन बलियो भईसकेको थियो । उनका लडाकुले पहिले नै तालीम लिइसकेका थिए ।
सन् २०१४ जुनमा अचानक आईएसआईएसले पहिलोपटक विश्वसामु सामू आधुनिक हतियार र सेना भएको तस्बिरहरु सार्बजनिक गरेको थियो । विश्वले हेर्दाहेर्दै डरलाग्दो आतंकबादी संगठन बनेको थियो । यति ठूलो आतंकी संगठन निर्माण गर्नमा अमेरिका नै दोषी रहेको भनिन्छ । भनिन्छ अन्तराष्ट्रिय आतंकबादका जानकारहरु कयौ बिज्ञ र बिश्लेषकहरु यही अमेरिकाकै सहयोगमा ओसामा बिन लादेन र अलकायदाको जन्म गराईएको थियो । १९८० मा इराकलाई केमिकल हतियार दिएर सद्दामलाई सद्दाम हुसैन बनाईएको थियो । त्यसैगरी अहिले सिरायको फ्रीडम फाइटर्सलाई हतियार र तालीम दिएर आईएसआईएसको ब्यानरमा लड्ने बनाईयो भन्छन् तिनै बिज्ञहरु ।
सन् २०१६ को जी–२० (G-20) सम्मेलनमा रुसका राष्ट्रपति पुटिनले आईएसआईएसलाई ४० देशले सहयोग गरीराखेका र जसमा जी–२० भित्रकै देशहरु पनि सहभागी छन् भनेर खुलासा गरेका थिए । जानकार हरुका अनुसार सिरियाका कयौ शहरहरु कब्जा जमाएर बसेका छन् आईएसआईएसका लडाकुहरु जहाँ अधिक संख्यामा तेलका कुवाहरु छन् । त्यहि तेल बेचेर एकदिनको एक मिलियन डलर कमाउछ आईएसआईएस । ति पैसा हतियार खरीदमा प्रयोग गर्दैछ । जानकरहरुका अनुसार आफूले कब्जा जमाएका ठाउँहरुबाट टयाक्स, र फिरौतीबाट प्रत्येक दिन एक मिलियन डलर कमाई गर्छ ।
सन् २०१४ मा आईएसआईएस ले ६०० मिलियन डलर कमाएको थियो । २०१४ मै आईएसआईएसले इराकका बैंकबाट ५०० मिलियन डलर लुटेको थियो । २०१४ मै कच्चा तेल बेचेर १०० मिलियन डलर कमाएको थियो । आजसम्म बिदेशी नागरिकलाई बन्धक बनाएर २० मिलियन डलर फिरौतीबाट कमाई गरेको बताइन्छ ।
३५ हजार सेना उस्का साथमा रहेको भन्ने रिपोर्टलाई आधार मान्ने हो भने ८० देसका नागरिकहरु आईएसआईएसमा सामिल भई सकेका छन् जानकारहरुका अनुसार आईएसआईएसले इराक र सिरियाका लडाकुलाई ५०० डलर र बिदेशि लडाकुलाई ८०० डलर तलब दिने गरेको बताइन्छ । बिभिन्न अन्तराष्ट्रिय समाचार ऐजेन्सीका अनुसार आईएसआईएसको साथमा हजारौ, लाख डलर सम्पति भएको कुरा सार्बजनिक गरेका छन् । अमेरिकाले आईएसआईएसको सफाई गर्छु भनी २०१४ बाट आजसम्म ३ बिलियन डलर खर्च गरि सकेको र १ दिनमा मात्रै ९ मिलियन डलर खर्च गरी रहेको कुरा बहिरिएका छन् । इजरायलले छिमेकी देशहरुमा आतंक फैलाएर अफ्नो देशको समान बेचिरहेको कुरा बाहिरिने गरेका छन् । यो सबै तेलको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको जानकारहरु बताउँछन् । सीरिया, लीबिया, र इराक तेलका धनी देश हुन् ।
अहिले सम्म सिरियामा ५ लाख मानिसहरुले ज्यान गुमाइसकेका छन् । २० लाख मानिस बिस्थापित भई सकेका छन भने धेरै ठाउ र शहरहरु आईएसआईएस को कब्जामा छन् । दोस्रो बिश्वयुद्ध पछिको सबैभन्दा बढी मनाबिय संकट सिरियामा उत्पन्न भएको छ । अहिले यस आतंकका कारण ५ लाख मनिसमा मरी सकेका छन् । जसमा १२ लाख बच्चा छन्। ४८ लाख मानिस सरणार्थी भइसकेका छन् । २० लाख बच्चाहरु सरणार्थी सरह बिभिन्न देशमा बस्न बाध्य भएका छन् । यही आतंकका कारण सीरियले ४ लाख ८५ हजार करोड भन्दा बढिको नोक्शान भोगिसकेको छ । जानकारहरुका अनुसार यदि सिरियालाई पुरानै स्थितिमा फर्काउने हो भने ११ लाख करोड रूपैया सिरियाको पुनर्निर्माणमा खर्च लाग्ने तथ्य सार्बजनिक गरेका छन् । युनिसेफको रिपोट लाई आधार मान्ने हो भने करीब २६ लाख सीरियन बच्चाहरु स्कूल जानबाट बंचित छन् । सिरियाको युद्ध बिस्वकै टाउको दुखाई बनेको छ । सिरियाको हिजो स्वर्गको चौक भनेर चिनीने ऐतिहाशिक बिरासत बोकेको पलमायरा शहर आज दुइ ठूला महासक्ति देश अमेरिका र रुसको स्वार्थका कारण नर्क लोक बनेको छ । आज आतंकबादका कारण पलमायरा शहर रोइरहेको छ ।
यो लेख बिभिन्न अन्तराष्ट्रीय संचारमाध्यम, पत्र, पत्रिका, टेलिभिजन, बीबीसी नेपालीहरुलाई आधार बनाएर तयार पारिएको हो ।